Nyaya Youpenyu: Kuratidzawo Muenzaniso Wandakaratidzwa | Thomas McLain
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabiye Kamba Kannada Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mingrelian Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Ndakaedza Kuratidzawo Muenzaniso Wakanaka Wandainge Ndaratidzwa
Yakataurwa naThomas McLain
“Unoziva kuti ndava nemakore mangani here?” ndakabvunza kudaro. “Ndinotoziva makore ako chaiwo,” akapindura kudaro Izak Marais, uyo akandifonera ndiri kuColorado iye ari kuPatterson, New York. Regai nditsanangure zvakaitika kusvika paakazondifonera.
NDAKABEREKERWA muWichita, kuKansas, U.S.A., musi wa10 December, 1936, uye ndini dangwe pavana 4. Vabereki vangu, William naJean, vaiva vanamati vaJehovha vaishingaira. Baba ndivo vaiva muranda wekambani, sekushevedzwa kwaiitwa hama yaitungamirira muungano kare ikako. Amai vangu vakadzidziswa chokwadi cheBhaibheri naamai vavo, Emma Wagner, avo vakadzidzisawo vamwe vanhu vakawanda vanosanganisira Gertrude Steele, uyo akava mumishinari kuPuerto Rico kwemakore akawanda. * Saka ndaiva nemienzaniso yakanaka yakawanda yekutevedzera.
KUYEUKA MIENZANISO YAKANAKA
Baba vangu vakamira pakona vachipa vanhu magazini
Mumwe musi weMugovera ari manheru, ndiine nemakore mashanu, ndaiva nababa vangu tichipa magazini eNharireyomurindi neConsolation (yava kunzi Mukai!) kuvanhu vaipfuura mumugwagwa. Panguva iyoyo, nyika yedu yaibatanidzwa chaizvo muHondo yeNyika II. Mumwe chiremba ainge akadhakwa akapfuura nepataiva, ndokubva atanga kutuka Baba nekuti semuKristu vaisaenda kuhondo, achiti vaiva gwara uye vainzvenga kupinda muchiuto. Chiremba wacho akabva aisa chiso chake pedyo nechaBaba ndokuti, “Iwe gwara, ndirove tione!” Ndakatya asi ndakayemura zvakaitwa naBaba. Vakangoramba vachipa magazini kuvanhu vakanga vaungana. Pakabva papfuura mumwe musoja, chiremba ndokubva ashevedzera kwaari achiti, “Gadzirisa gwara iri!” Musoja wacho akaona kuti chiremba uyu akanga akadhakwa, ndokubva amuti, “Enda kumba unorara iwe!” Vese vakabva vaenda. Pandinozvifunga, ndinoonga kuti Jehovha akapa baba vangu ushingi. Vaiva nemabhabhashopu maviri muWichita, uye chiremba wacho aitogerwawo ikoko!
Ndiine vabereki vangu tichienda kugungano kuWichita kuma1940
Pandakanga ndava nemakore 8, vabereki vangu vakatengesa imba nemashopu avo, vakagadzira karavhani, ndokutamira kuColorado kwaidiwa vaparidzi vakawanda. Takanogara pedyo neguta reGrand Junction, uye vabereki vangu vaipayona vachishanda mumapurazi mairimwa uye maichengetwa zvipfuyo. Ungano yakatangwa nekuti vaishanda nesimba uye vaikomborerwa naJehovha. Tiri ikoko, musi wa20 June, 1948, Baba vakandibhabhatidza murukova, pamwe chete nevamwe vakanga vagamuchira chokwadi cheBhaibheri, kusanganisira Billie Nichols nemudzimai wake. VanaNichols vakazoita basa remudunhu uye ndizvo zvakazoitwawo nemwanakomana wavo nemudzimai wake.
Taishamwaridzana nevakawanda vaishanda nesimba mubasa raJehovha, kunyanya vemumhuri yekwaSteele, vanoti Don naEarlene, Dave naJulia, uye Si naMartha. Tainakidzwa nekukurukura Bhaibheri uye vakandikurudzira chaizvo. Vakandiratidza kuti upenyu hunova nechinangwa uye tinofara zvechokwadi kana tikaisa Umambo pekutanga.
Pandaiva nemakore 19, mumwe sahwira wedu ainzi Bud Hasty akandikumbira kuti tipayone tese nechekumaodzanyemba kweUnited States. Mutariri wedunhu akatiudza kuti tiende kuRuston, Louisiana, kwaiva neZvapupu zvakanga zvisingachaiti basa. Takaudzwa kuti tiite misangano yese vhiki rega rega pasinei nekuti vangani vaipinda. Takawana nzvimbo yekupindira misangano, ndokubva taigadziridza. Taiita misangano yese, asi takaita nguva tichingopinda tiri vaviri. Taichinjana pakuitisa zvikamu zvemisangano, mumwe achipindura mibvunzo yacho yese. Kana chikamu chemusangano chiine muenzaniso, taienda tese pachikuva, tosara tisina muteereri! Imwe hanzvadzi yakanga yakwegura yakazotangawo kupinda misangano. Nekufamba kwenguva, vamwe vadzidzi veBhaibheri uye vamwe vakanga vasingachaiti basa vakatanga kuuya kumisangano, uye pasina nguva takanga tava neungano yakasimba.
Mumwe musi, ini naBud takasangana nemumwe mufundisi weChurch of Christ, ndokubva ataura nezvemamwe magwaro andaisaziva nezvawo. Izvi zvakambondivhiringidza zvikaita kuti ndinyatsofungisisa zvandaitenda. Ndakaita vhiki rese ndichiverenga kusvika pakati peusiku kuti ndiwane mhinduro dzemibvunzo yake. Izvozvo zvakaita kuti chokwadi chinyatsodzika midzi mumwoyo mangu, uye ndakanga ndava nechido chekusanganazve nemumwe mufundisi.
Papera nguva pfupi, mutariri wedunhu akati nditamire kuEl Dorado, Arkansas, kuti ndinobatsira ungano yeko. Pandaivako, ndaigara ndichidzokera kuColorado kakawanda nekuti komiti yaisarudza vanhu vanopinda muchiuto yaida kundiona. Mumwe musi ndichienda ikoko nevamwe vandaipayona navo, takaita tsaona tava muTexas, mota yangu ikabva yaparara. Takafonera imwe hama ikauya kuzotitora, ndokubva yaenda nesu kumba kwayo uye kumisangano yeungano. Kumisangano kwakapiwa chiziviso chekuti takanga taita tsaona, uye hama dzakatibatsira nemari. Hama yekutitora yakatengesawo mota yangu ne$25.
Takakwanisa kuenda kuWichita, kwaipayona sahwira wedu ainzi E. F. McCartney wataishevedza kuti Doc. Mapatya ake, Frank naFrancis, vachiri shamwari dzangu dzepamwoyo. Vaiva nemota yekare yavakanditengesera ne$25, mari chaiyo yandainge ndabhadharwa pamota yangu yainge yaparara. Apa ndipo pandakatanga kunyatsoona kuti Jehovha akandipa chinhu chaizondibatsira nekuti ndaiisa zvine chekuita neUmambo pekutanga. Panguva iyi, mhuri yekwaMcCartney yakaita kuti ndizivane neimwe tsvarakadenga yaida zvekunamata, Bethel Crane. Amai vake, Ruth, Chapupu chinoshingaira zvikuru muWellington, Kansas, vakaramba vachipayona kusvika vava nemakore ekuma90. Ini naBethel takazochata pasati papera gore, muna 1958, uye takabva tatanga kupayona tese muEl Dorado.
Pashure pekufunga nezvevanhu vaiita zvakanaka vatainge takura navo, takasarudza kugadzirira kuita chero zvataizonzi tiite nesangano raJehovha. Takanzi tinoshanda semapiyona chaiwo kuWalnut Ridge, Arkansas. Muna 1962, takafara patakakokwa kukirasi yechi37 yeGiriyedhi. Zvakatifadza kuti Don Steele aivawo mukirasi yacho. Patakapedza kudzidza, ini naBethel takanzi tiende kunoshanda kuNairobi, Kenya. Takarwadziwa patakabva muNew York, asi kurwadziwa ikoko kwakabva kwachinja kuva mufaro patakagamuchirwa nehama dzedu panhandare yendege muNairobi!
Tiina Mary naChris Kanaiya muushumiri kuNairobi vedu
Pasina nguva takanga tava kufarira nyika yeKenya uye basa rekushumira ikoko. Vanhu vatakatanga kudzidza navo Bhaibheri ndokufambira mberi ndiChris naMary Kanaiya. Vachiri mubasa renguva yakazara muKenya. Gore rakatevera takanzi tiende kuKampala, Uganda. Tisu taiva mamishinari ekutanga munyika iyoyo. Nguva iyoyo yainakidza nekuti vakawanda chaizvo vaida kudzidza chokwadi cheBhaibheri, uye vakavawo Zvapupu. Zvisinei, papera makore matatu nehafu tiri muAfrica, takadzokera kuUnited States kuti tinoita zvemhuri. Zuva ratakabva muAfrica, takarwadziwa kupfuura zvatakaita patakabva muNew York. Takanga tasvika pakuda vanhu vemuAfrica uye taitarisira kuti rimwe zuva tichadzokerako.
Takanogara nechekumadokero kweColorado, kwaigara vabereki vangu. Papera nguva pfupi, takava nemwanasikana wedu wekutanga, Kimberly, uye papera gore nemwedzi mishanu, Stephany akaberekwawo. Takakoshesa basa iri rekuva vabereki, uye takaronga kuti tiroverere chokwadi mumwoyo yevanasikana vedu. Taida kuvaratidza muenzaniso watakaratidzwawo. Taizivawo kuti kunyange zvazvo kuva mienzaniso yakanaka kuchigona kubatsira vana chaizvo, hazvirevi kuti vachabva vangokura vachishumira Jehovha. Munin’ina wangu nehanzvadzi yangu vakasiya chokwadi. Ndinovimba kuti vachatevedzera zvakare muenzaniso wavakaratidzwa.
Takanakidzwa chaizvo nekurera vanasikana vedu uye taiedza kuita zvinhu semhuri. Sezvo taigara pedyo neAspen, Colorado, tose takadzidza mutambo weskiing kuitira kuti tizopota tichiuita pamwe chete. Kutandara uku kwaitipa mikana yekukurukura nevanasikana vedu. Taimboenda kunokemba navo uye tainakidzwa chaizvo nekukurukura tichidziya moto. Kunyange zvazvo vaiva vadiki, vaitaura nezvekuti vanoda kuzoitei kana vakura uye kuti vanoda kuzoroorwa nevarume vakaita sei. Takaedza nepataigona napo kudzidzisa vanasikana vedu kuti vakoshese zvinhu zvekunamata. Taivakurudzira kuva nechinangwa chekupinda mubasa renguva yakazara uye kuroorwa nevanhu vane chinangwa chekuita basa renguva yakazara. Takaedza kuvabatsira kuti vaone kuti zvakanaka kuti vasaroorwa vachiri vadiki. Taiwanzoti: “Mira kusvika wava nemakore 23.”
Sezvaiitwa nevabereki vedu, takaita zvese zvataigona kuti tipinde misangano uye kubuda muushumiri nguva dzose semhuri. Takaronga kuti vamwe vaiva mubasa renguva yakazara vagare pamba pedu. Taitaurawo nezvekuda kwataiita basa reumishinari. Taitarisira kuti mumwe musi tichazoshanya kuAfrica tose semhuri. Vanasikana vedu vaida chaizvo kuita izvozvo.
Taigara tichidzidza semhuri, dzimwe nguva tichienzanisira zvaigona kuitika kuchikoro. Taiita kuti vanasikana vedu vaite seZvapupu vachipindura mibvunzo. Vainakidzwa chaizvo pavaidzidza saizvozvo uye zvaiita kuti vave nechivimbo. Sezvavaikura, dzimwe nguva vaimbonyunyuta nezvekuva nechidzidzo chemhuri. Mumwe musi ndakashaya kuti ndoita sei, ndokubva ndavati vaende mudzimba dzavo uye ndakavati nhasi hatisi kudzidza. Zvakavavhundutsa, ndokutanga kuchema, uye vakati vaida kudzidza. Takabva taona kuti kuvadzidzisa kwataiita nezvaJehovha kwainyatsovabatsira. Nekufamba kwenguva, vakava nechido chekudzidza semhuri, uye vainzwa vakasununguka kutaura zvaiva pamwoyo pavo. Asi dzimwe nguva zvaitiomera pavaitaura kuti vaisawirirana nezvimwe zvinodzidziswa neBhaibheri. Kunyange zvakadaro, zvaitibatsira kuona zvaiva mumwoyo yavo. Pashure pekukurukura navo, vaizosvika pakugutsikana nemafungiro aJehovha panyaya dzacho.
KUJAIRANA NEZVIMWE ZVAKACHINJA
Takakurumidza kuyarutsa vanasikana vedu kupfuura zvataitarisira. Tichitungamirirwa nesangano raMwari, takaita zvose zvataigona kuti vakure vachida Jehovha. Takafara chaizvo vose pavakatanga kupayona vapedza sekondari, uye vakadzidzira mabasa ekuti vazviriritire. Vakazotamira kuCleveland, Tennessee, nedzimwe hanzvadzi mbiri kuti vanoshumira kwaidiwa vaparidzi. Taivasuwa chaizvo, asi taifara kuti vaishandisa upenyu hwavo mubasa renguva yakazara. Ini naBethel takazotangazve kupayona, uye izvi zvakaita kuti tive nedzimwe ropafadzo dzaifadza. Taimboita basa remudunhu uye kuronga magungano.
Vasati vatamira kuTennessee, vanasikana vedu vakashanya kuLondon, England, uye vakaenda kunoona hofisi yebazi. Vari ikoko, Stephany, uyo aiva nemakore 19 panguva iyoyo, akaonana naPaul Norton, aishumira paBheteri. Pavakazoenda zvakare, Kimberly akaonana naBrian Llewellyn, uyo aishanda naPaul. Paul naStephany vakazochata, asi pashure pekunge Stephany asvitsa makore 23. Brian naKimberly vakachata gore rakatevera, Kimberly paakanga ava nemakore 25. Saka vese vakazoroorwa vasvitsa makore 23. Takafarira nemwoyo wose varume vavakasarudza kuroorana navo.
Tiina Paul, Stephany, Kimberly, naBrian kuhofisi yebazi kuMalawi muna 2002
Vanasikana vedu vakatiudza kuti muenzaniso wedu uye wevabereki vedu wakavabatsira kuti vateerere murayiro waJesu ‘wekutanga kutsvaka Umambo,’ kunyange pavaishaya mari. (Mat. 6:33) Muna April 1998, Paul naStephany vakakokwa kuti vapinde kirasi yechi105 yechikoro cheGiriyedhi uye vakazonzi vaende kunoshumira kuMalawi. Panguva iyoyo, Brian naKimberly vakakokwa kunoshanda paBheteri rekuLondon uye vakazonzi vaende kunoshanda paBheteri rekuMalawi. Takafara zvekufara zviya nekuti iyi ndiyo nzira yakanaka chaizvo yekuti vechidiki vashandise nayo upenyu hwavo.
KUMWE KUKOKWA KUNOFADZA
Muna January 2001, ndakafonerwa sezvandambotaura kwekutanga. Hama Marais, mutariri wedhipatimendi reTranslation Services, vakataura kuti hama dzaironga kuti vashanduri pasi rose vaitiswe kosi yekuvabatsira kunzwisisa Chirungu, uye ndakasarudzwa kuti ndidzidziswe kuva mumwe wevarayiridzi vacho ndiine makore 64. Ini naBethel takanyengetera nezvazvo uye takakurukura navanaamai vedu vakanga vakura kuti tinzwe kuti vanotii. Vese vaida kuti tiende, kunyange zvazvo taisazokwanisa kuvabatsira. Ndakazofonera Hama Marais ndichivaudza kuti taizofara chaizvo kuti tiite basa racho.
Amai vangu vakabva vabatwa kenza. Ndakavaudza kuti taizogara tobatsirana nehanzvadzi yangu Linda pakuvachengeta. “Hapana chamuchagona kundibatsira nacho,” vakapindura kudaro Amai. “Ndingatowedzera kurwara kana mukasaenda.” Linda aidawo kuti tiende. Takaonga zvikuru kuzvipira kwavo uyewo kubatsirwa kwatakaitwa neshamwari dzemunharaunda yacho! Patakaenda kuWatchtower Educational Center kuPatterson, mangwana acho Linda akatifonera achitiudza kuti Amai vashaya. Takaisa pfungwa pabasa redu sezvataizokurudzirwa kuti tiite naamai kudai vanga vari vapenyu.
Takafara kuti takanzi titange kuenda kubazi rekuMalawi kwaiva nevanasikana vedu. Takabatanidzwa zvakare. Takazoenda kunoitisa kosi iyi kuZimbabwe uyewo kuZambia. Pashure pekuitisa kosi yacho kwemakore matatu nehafu, takakumbirwa kuti tidzokere kuMalawi kuti tinyore zvakaitika kuZvapupu zvainge zvatambudzwa nemhaka yekusava nedivi razvinotsigira. *
Tiri muushumiri nevazukuru
Takarwadziwa zvakare patakadzokera kumba kuBasalt, Colorado muna 2005. Tiri ikoko, ini naBethel takaenderera mberi nekupayona. Muna 2006, Brian naKimberly vakatamira paimba iri padivi pedu kuti varere vanasikana vavo vaviri, Mackenzie naElizabeth. Paul naStephany vachiri kuMalawi, uye Paul ari muDare Rebazi. Zvandava kusvitsa makore 80, zvinondifadza zvikuru kuona kuti varume vechidiki vandaimboshanda navo kwemakore vava kuita mabasa andaimboita. Mufaro watiinawo unonyanya kubva pamienzaniso yakanaka yatakaona uye yatakaedzawo kuratidza vana nevazukuru vedu.
^ ndima 5 Ona Nharireyomurindi yeChirungu yaMay 1, 1956, mapeji 269-272, uye yaMarch 15, 1971, mapeji 186-190 kuti unzwe zvakawanda nezvebasa reumishinari rakaitwa nevemumhuri yekwaSteele.
^ ndima 30 Semuenzaniso, ona nyaya youpenyu yaTrophim Nsomba iri muNharireyomurindi yaApril 15, 2015, mapeji 14-18.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndakaedza Kuratidzawo Muenzaniso Wakanaka Wandainge Ndaratidzwa